काँग्रेसको भोलिको वडा अधिवेशन यसकारण महत्वपूर्ण « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ४ असोज । नेपाली काँग्रेसले भोलि सात जिल्लाको वडा अधिवेशन गर्दैछ । ५७ जिल्लाको अधिवेशन भइसकेको अवस्थामा भोलिको अधिवेशन निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । बढी प्रतिनिधि चयन हुने जिल्लाहरु समेतका वडामा अधिवेशन हुन लागेकाले यो महत्वपूर्ण मानिएको हो ।
देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका जिल्लाहरु मोरङ र काठमाडौं समेतका वडामा भोलि अधिवेशन हुँदैछ । ती जिल्लाहरुमा बढी प्रतिनिधि चयन हुने गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, बाजुरा, कपिलवस्तु र बर्दियामा पनि भोलि नै अधिवेशन हुँदैछ । यी जिल्लाहरुमा क्रियाशील सदस्यता विवादले अधिवेशन सरेको हो ।
काठमाडौंमा काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु छन् । सभापतिका दाबेदार प्रकाशमान सिंह, महामन्त्रीका दाबेदारहरु डा. प्रकाशशरण महत र गगन थापा काँग्रेसका हस्ती हुन् जो काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । काठमाडौं काँग्रेसको बलियो आधार क्षेत्र मध्येको हो ।
मोरङ जिल्ला पनि काँग्रेसको गढ मानिन्छ । वीपी कोइराला यही जिल्लाका थिए । काँग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लामो समय मोरङबाट चुनाव जितेका थिए । कोइराला परिवारका सदस्यमध्ये डा. शेखर कोइराला मोरङलाई आधार बनाएर राजनीतिक गर्दै आएका छन् । कोइराला परिवारका कतिपय सदस्य यही जिल्लाबाट राजनीतिक गर्दै आएका छन् । यसकारण पनि यो जिल्लामा हुने अधिवेशनको विशेष महत्व छ ।